China DL-Methionine CAS 59-51-8 yeChechi Giredhi (FCC / AJI / UPS / EP) vagadziri uye vanotengesa | Honray
DL-Methionine CAS 59-51-8 yeChikafu Giredhi (FCC / AJI / UPS / EP)
Chigadzirwa Chigadzirwa: DL-Methionine
CAS HERE: 59-51-8
Chigadzirwa Zvivakwa: Inonyungudika poindi ye276-279 ℃, Inonyungudika mumvura, Yakanyanya kuomarara muEthanol, Inenge isinganyungudike muacetone ethanol.
Kurongedza: 25kg / bhegi, 25kg / dhiramu kana sekuda kwevatengi
Chigadzirwa Chigadzirwa :: DL-Methionine
DL-methionine (Yakapfupikiswa Met) ndeimwe ye18 yakajairika amino acids, uye imwe yeasere akakosha amino acids kumhuka nemuviri wemunhu. Inonyanya kushandiswa sekuwedzera kwekudya muhove, huku, nguruve uye mombe kudya kuitira kuti mhuka neshiri zvikure zvine hutano. Iyo inogona kugadzirisa mukaka kuchengetedzwa kwemombe, kudzivirira kuitika kwehepatosis. Kunze kwezvo, inogona zvakare kushandiswa seamino acid mishonga, jekiseni mhinduro, inoution infusion, iyo inomiririra yekudzivirira chiropa, iyo yekurapa chiropa cirrhosis uye chepfu hepatitis.
DL-methionine inogona kushandiswa mukugadzirisa kwemavhitamini, mishonga yekuwedzera uye zvekuwedzera zvekudya.
DL-methionine ndechimwe chezvinhu zvakakosha zveamino acid infusion uye mukomboni amino acid. DL-methionine ine anti-mafuta chiropa chinoshanda. Kutora mukana weiri basa, iwo ekugadzira ekurapa mavitamini anogona kushandiswa sekuchengetedza chiropa kugadzirira.
Sezvo yakakosha amino asidhi yemuviri wemunhu, DL-methionine inogona kushandiswa sekuwedzera kwekudya mune zvekudya uye kuchengetedza kuchengetedza senge hove zvigadzirwa zvekeke.
Iwedzerwe kune chikafu chemhuka, DL-methionine inogona kubatsira mhuka kukura nekukurumidza munguva pfupi uye ingangoita 40% yezvikafu zvavo zvinogona kuchengetedzwa.
Sechinhu chakakosha mupuroteni synthesis, DL-methionine ine chekuchengetedza pamutsipa wemwoyo. Panguva imwecheteyo, DL-methionine inogona kushandurwa kuita Taurine nesarufa, nepo Taurine iine yakajeka hypotensive mhedzisiro. DL-methionine zvakare ine basa rakanaka rekudzivirira chiropa uye detoxification, saka inowanzo shandiswa pakurapwa kwezvirwere zvechiropa senge cirrhosis, mafuta chiropa uye dzakasiyana siyana uye dzakaipisisa hutachiona hepatitis. Iine maitiro akanaka kwazvo.
Muhupenyu, DL-methionine yakakwira muzvikafu zvakadai sembeu yezuva, zvigadzirwa zvemukaka, mbiriso, uye algae yegungwa.
yakajeka & isina ruvara
Heavy simbi (Pb)
Residue pamusoro kuvesa
Pashure: L-Tryptophan CAS 73-22-3 Yekupa Giredhi
Zvadaro: L-Isoleucine CAS 73-32-5 YeChikafu Giredhi (AJI USP EP)
L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Chikafu cheGiredhi, Pharm Giredhi L-Leucine, L-Threonine Pharm Giredhi, Kudya Kwemhuka,